Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 17, 2020 00: 30 No Comments
Aan ka hadalno tan sawir fadlan!
Meel ku ogow sawirka waqtiga iyo booska: xagee jirtay iyo mudo intee leeg ??
Waa kuwee shaqsiyaadka astaanta u ah sawirka?
Munaasabada muxuu ahaa ??
Digaagaddu ​​waxay ukunta dhigtaa markay dadku fiirinayaan. - Waxaan qarinaa sirta ganacsiga!